Lasa fantatrao tsara ny olona iray, rehefa hainao hoe inona no zavatra efa vitany sy ny olana efa natrehiny. Hahafantatra tsara an’Andriamanitra koa ianao, raha hainao ny zavatra efa nataony. Ho hitanao hoe mahasoa anao dieny izao izay nataony sady hahatonga anao ho sambatra amin’ny hoavy.
NAMORONA NY ZAVA-DREHETRA IZY MBA HAHASOA ANTSIKA
I Jehovah Andriamanitra no Mpamorona, ary hita amin’ny zavatra nataony ny toetrany. (Romanina 1:20) “Izy no Mpanao ny tany, ary tamin’ny heriny no nanaovany azy. Izy koa no nanao izay hahamafy orina ny tany lonaka tamin’ny fahendreny, ary Izy no namelatra ny lanitra tamin’ny fahiratan-tsainy.” (Jeremia 10:12) Hita koa hoe tena tia antsika izy matoa nataony faran’izay kanto ny zavatra noforoniny.
Eritrereto, ohatra, ny fomba nanaovany antsika. Miavaka isika satria nataony “araka ny endriny.” (Genesisy 1:27) Midika izany hoe nataony afaka manahaka ny toetrany isika, na dia tsy mahavita manahaka tanteraka azy aza. Isika irery koa no zavaboary afaka mahalala ny fomba fiheviny sy ny fitsipiny. Vao mainka isika ho sambatra sady hisy dikany ny fiainantsika, raha manana ny fomba fisainany sy mankatò azy isika. Nataony afaka mifandray akaiky aminy koa isika.
Eritrereto indray ny tany. Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy, satria nanao soa ka nanome [antsika] ranonorana avy eny amin’ny lanitra sy taon-jina, ary nahavoky ny [fontsika] tamin’ny hanina sy ny fifaliana.” (Asan’ny Apostoly 14:17) Tsy hoe izay ilaintsika fotsiny no nomen’Andriamanitra. Namorona zavatra be dia be sady isan-karazany koa izy, mba hahafahantsika mankafy fiainana. Vao santatry ny amin’ny hoavy anefa izany.
Namorona ny tany i Jehovah, satria tiany hiaina mandrakizay eto ny olona. Resahin’ny Baiboly hoe ‘nomeny ho an’ny zanak’olombelona ny tany’ ary “tsy hoe tsy misy antony ny namoronany azy fa nataony honenana.” (Salamo 115:16; Isaia 45:18) Hoy koa ny Salamo 37:29: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”
Namorona an’i Adama sy Eva àry i Jehovah, ary napetrany tao amin’ny Paradisa izy mivady mba “hiasa sy hikarakara” azy io. (Genesisy 2:8, 15) Hoy Andriamanitra tamin’izy ireo: “Manàna taranaka, ary mihabetsaha ka mamenoa ny tany. Anjakao ny tany.” (Genesisy 1:28) Afaka nanantena ny hiaina mandrakizay teto an-tany àry izy mivady. Tsy nankatò an’Andriamanitra anefa izy ireo, ka lasa tsy anisan’ireo ‘olo-marina handova ny tany.’ Nampiova ny fikasan’i Jehovah ve izany? Mbola ho hitantsika ny valin’izany, fa andao aloha isika hijery zavatra hafa nataony.
NOMENY ANTSIKA NY TENINY
Nanome antsika ny Baiboly Andriamanitra, satria tiany hahafantatra azy isika. (Ohabolana 2:1-5) Tsy ho voavaly ao daholo akory ny fanontaniantsika momba an’Andriamanitra. Tsy misy boky mahavita an’izany! (Mpitoriteny 3:11) Manampy antsika hahafantatra azy anefa izay rehetra voalaza ao. Rehefa mamaky ny fomba nifandraisany tamin’ny olona, ohatra, isika dia lasa fantatsika ny toetrany. Hita ao koa hoe olona manao ahoana no tiany sy tsy tiany. (Salamo 15:1-5) Resahin’ny Baiboly hoe hoatran’ny ahoana ny fivavahana sy fitondran-tena tian’Andriamanitra, ary ahoana no tiany hiheverantsika ny vola sy harena. Resahina ao koa ny zavatra nataon’i Jesosy Kristy sy nolazainy, ka vao mainka haintsika hoe hoatran’ny ahoana i Jehovah Rainy.—Jaona 14:9.
Nomen’Andriamanitra antsika koa ny Baiboly, satria tiany ho sambatra isika sady tiany hisy dikany ny fiainantsika. Atoron’i Jehovah ao hoe inona no mahasambatra ny fianakaviana, ahoana no hahaizana mianina amin’izay ananana, ary inona no atao mba tsy hanahy be loatra. Mamaly an’ireo fanontaniana manahiran-tsaina ny olona koa ny Baiboly. Ohatra hoe: Nahoana no be dia be ny olona mijaly? Inona no hitranga amin’ny hoavy? Hazavaina ao koa hoe inona no efa nataon’Andriamanitra, mba ho tanteraka ilay fikasany tany am-boalohany.
Misy porofo hafa koa ahitana hoe tena miavaka ny Baiboly. Foto-kevitra iray ihany no resahiny, na dia lehilahy 40 teo ho eo aza no nanoratra azy io, ary 1 600 taona vao vita izy manontolo. (2 Timoty 3:16) Tsy niova ny hafatra ao anatiny, na dia efa ela be aza izy io no nosoratana. Manaporofo an’izany ireo Baiboly sora-tanana fahiny miisa an’arivony. Tsy navelan’ny olona sasany hadika, na hozaraina, na hovakina koa ny Baiboly. Izy io anefa izao no boky miely indrindra sy voadika amin’ny fiteny betsaka indrindra. “Haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra” tokoa “ny tenin’Andriamanitsika.”—Isaia 40:8.
NANAO ZAVATRA IZY MBA HO TANTERAKA NY FIKASANY
Hitantsika teo aloha hoe tian’Andriamanitra hiaina mandrakizay eto an-tany ny olombelona. Nanota anefa i Adama rehefa tsy nankatò. Tsy afaka nanantena ny hiaina mandrakizay intsony àry izy sy ny taranany. “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” (Romanina 5:12) Hoatran’ny hoe tsy ho tanteraka intsony ny fikasan’Andriamanitra tamin’izay. Inona àry no nataon’i Jehovah?
Nifanaraka tamin’ny toetrany ny zavatra nataony. Nanameloka an’i Adama sy Eva izy, nefa koa nanao izay hamonjena ny taranak’izy ireo. Hendry i Jehovah ka nahita vahaolana mety tsara, ary tonga dia nampahafantariny ilay izy. (Genesisy 3:15) I Jesosy Kristy Zanany no hampiasainy mba hanafahana ny olona amin’ny ota sy ny fahafatesana. Amin’ny fomba ahoana?
Nirahin’i Jehovah ho etỳ an-tany i Jesosy mba hampianatra ny olona ny lalana mankany amin’ny fiainana, ary “hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon’ny maro.” * (Matio 20:28; Jaona 14:6) Afaka nanome ny vidim-panavotana izy, satria lavorary hoatran’i Adama. Nankatò foana izy fa tsy hoatran’i Adama, ary nafoiny hatramin’ny ainy mihitsy aza. Tsy nanan-tsiny i Jesosy ka natsangan’i Jehovah ary niverina tany an-danitra indray. Afaka manantena ny hiaina mandrakizay àry ny olombelona mankatò, noho ny soron’i Jesosy. “Fa tahaka ny nahatongavan’ny maro ho mpanota noho ny tsy nankatoavan’ny olona iray, no hahatongavan’ny maro ho marina noho ny nankatoavan’ny olona iray.” (Romanina 5:19) Noho ny soron’i Jesosy, dia ho tanteraka ilay fikasan’Andriamanitra hoe hiaina mandrakizay eto an-tany ny olombelona.
Hitantsika teo ny zavatra nataon’i Jehovah rehefa tsy nankatò i Adama. Manampy antsika hahafantatra kokoa an’Andriamanitra izany. Lasa fantatsika hoe tsy misy mahavita misakana azy tsy hanatanteraka ny fikasany. (Isaia 55:11) Lasa tsapantsika koa hoe tena tia antsika izy. Hoy ny 1 Jaona 4:9, 10: “Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra tamintsika: Nirahiny ho amin’izao tontolo izao ny Zanany lahitokana mba hahazoantsika fiainana amin’ny alalany. Ary izany fitiavana izany dia tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika ka nanirahany ny Zanany ho sorona fampihavanana noho ny fahotantsika.”
“Tsy mba niaro ny Zanany” Andriamanitra, “fa nanolotra azy hamonjy antsika rehetra.” Azo antoka àry hoe “homeny antsika amin-katsaram-panahy ... koa ny zavatra hafa rehetra” nampanantenainy. (Romanina 8:32) Inona avy izany? Hiresaka an’izany ny lahatsoratra manaraka.
INONA NO EFA NATAON’ANDRIAMANITRA? Namorona ny olombelona i Jehovah, satria tiany hiaina mandrakizay eto an-tany izy ireo. Nanome antsika ny Baiboly izy, satria tiany hahafantatra azy isika. Nanome ny vidim-panavotana tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy koa izy, mba ho azo antoka hoe ho tanteraka ny fikasany
^ feh. 16 Manazava bebe kokoa momba ny vidim-panavotana ny toko 5 amin’ny boky Inona no Azonao Ianarana ao Amin’ny Baiboly? Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy io, ary azo alaina ao amin’ny www.jw.org/mg.
Tantaran’ny Baiboly Tantara & Baiboly Andriamanitra Valin’ireo Fanontaniana Ara-baiboly
Hanao ahoana ny fiainana rehefa hitondra ny tany ny Fanjakan’Andriamanitra?
Hizara Hizara Inona no Efa Nataon’Andriamanitra?